Johannesburg na-bụ nwere nchekwa? | Igbo kasahorow
ụbọchị ụka. Ọnwa Isii 20, 2021
Johannesburg na-bụ nwere nchekwa?
Jozi, Fraide. Ọnwa Iri 16, 2020 - Satọde. Ọnwa Isii 19, 2021. 𓀠 507
Anyị na-ebi johannesburg n'ime. Anyị na-imetuta nwere nchekwa.
Ọnye?: Ndị mmadụ ahụ nke Johannesburg.
Mgbe?: Monde. Ọnwa Nke Anọ 01, 2019: Tuzde. Ọnwa Atọ 31, 2020
Gịnị?: SAPS Crime Statistics
549 akụkọ ụmụ ojii uwe ụmụ ojii ise na.
2010-2020: ya amụba 93%
otu ọnụọgụgụ: Orange Farm ojii uwe ojii
Na-Ezu Ohi Ụmụ Ugbọ-Ala :
841 akụkọ ụmụ ojii uwe ụmụ ojii ise na.
2010-2020: ya amụba 156%
otu ọnụọgụgụ: Moroka ojii uwe ojii
Na-Ezu Ohi Ụmụ Ụlọ Site :
1076 akụkọ ụmụ ojii uwe ụmụ ojii ise na.
2010-2020: ya amụba 16%
otu ọnụọgụgụ: Honeydew ojii uwe ojii
998 ndekọ ụmụ ojii uwe ụmụ ojii ise na.
2010-2020: ya belata 3%
otu ọnụọgụgụ: ojii uwe ojii Dobsonville
#mkpebi #anyị #ebi #johannesburg #imetuta #nwere nchekwa #ọnye #ndị mmadụ #Johannesburg #mgbe #gịnị #mmepụta #igbu-ọchụ #akụkọ #ise #uwe ojii #ojii #ya #amụba #ọnụọgụgụ #otu #ezu ohi #ugbọ-ala #ụlọ #ndina n'ike #ndekọ #belata #Dobsonville
Ụmụ Ọrụ Johannesburg N'Ime